Madaxweyne Xasan Sheekh oo safar dhulka ah ku gaaray Balcad iyo Jowhar | idalenews.com
Home Idale Somali News Update Madaxweyne Xasan Sheekh oo safar dhulka ah ku gaaray Balcad iyo Jowhar
Madaxweyne Xasan Sheekh oo safar dhulka ah ku gaaray Balcad iyo Jowhar
Kolonyo Gaaadiidka gaashaaman oo galbineyso Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhow safar dhinaca dhulka ah ku gaaray degmada Balcad , isagoo ugu sii gudbay magaalada Jowhar ee Xarunta Gobolka Shabellaha Dhexe.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo saakay kasoo duulay magaalada baladweyne oo xalay uu ku hoyday ayaa markii uu kasoo degay garoonka Muqdisho wuxuu ugu sii gudbay safar dhulka ah magaalada Jowhar oo 90-KM dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Muqdisho.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxay mudo daqiiqado ah ku hakadeen degmada Balcad, halkaasi oo dadweyne isugu soo baxay uu u gacan haadiyay.
Waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar iyadoo la dhigay ciidamo fara badan oo wadada daadsan, waxaana galbinaya wafdiga Madaxweynaha gaadiidka gaashaaman ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa si diiran loogu soo dhoweeyay magaalada Jowhar, iyadoo dadweyne fara badan oo luxayay caleemaha qoyan ay ka qeyb qaateen soo dhoweynta, waxaana la fasaxay ardayda waxbarashada iskuulada, xarumaha ganacsiga albaabada ayaa loo laabay.
Todobaadkii hore ayaa Madaxweynaha safar dhulka ah waxaa uu ku gaaray magaalada Marka ee Gobolka Shabellaha Hoose, iyadoo safarkan uu yahay kii labaad oo dhinaca dhulka ah oo uu ugu ambabaxo Gobolada deriska la ah Gobolka Banaadir .
Wixii warar dheeri ah ee ku saabsan safarka Madaxweynaha Wararkeena danbe kala soco.
Previous articleAxmed Jaamac:- Haddii aan ahaan lahaa Sirdoon Reer galbeedka ah xaajadu sidaa ma aysan sii ahaan laheyn ee waa leyga been sheegayaa
Next articleColaado Dagaal sababay oo ka taagan Deegaano ka mid ah mudug